အျောစကာဆုပေးပှဲ၌ Galaxy Z Flip ဖုနျးအသဈကို အမွညျးကြှေးသှားသညျ့ Samsung – SoShwe
Home/Tech/အျောစကာဆုပေးပှဲ၌ Galaxy Z Flip ဖုနျးအသဈကို အမွညျးကြှေးသှားသညျ့ Samsung
အျောစကာဆုပေးပှဲ၌ Galaxy Z Flip ဖုနျးအသဈကို အမွညျးကြှေးသှားသညျ့ Samsung
So Shwe February 10, 2020	Tech Leaveacomment
Samsung ကုမ်ပဏီသညျ အသဈထှကျရှိလာမညျ့ Galaxy Z Flip ဖုနျးအသဈကွျောငွာကို ယနမေ့နကျခငျးအစောပိုငျး၌ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ့ အျောစကာဆုပေးပှဲ၌ ထညျ့သှငျးကွညောသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုပါကွျောငွာသညျ Samsung ခဈြသူမြားအတှကျ အမွညျးသာရှိသေးပွီး ရကျအနညျးငယျအကွာမှသာ နယူးယော့ချမွို့၌ Samsung က တရားဝငျအတညျပွု ကွညောသှားမှာဖွဈပါတယျ။
(၁၅) စက်ကနျ့သာကွာမွငျ့သညျ့ အဆိုပါကွျောငွာဗီဒီယို၌ Samsung ရဲ့ Galaxy Z Flip ဖုနျးကို အသှငျသဈ၊ အမွငျသဈဖွငျ့ တှမွေ့ငျခဲ့ရပွီး ဖုနျးကိုခေါကျလကျြသားအနအေထားရဲ့ အောကျပိုငျးတဈဝကျ၌ ဓာတျပုံရိုကျရနျ မကျြနှာပွငျပါဝငျသလို အပျေါပိုငျးတဈဝကျ၌ အသအေခြာဓာတျပုံရိုကျယူမညျ့ ပုံရိပျကိုပွသထားပါတယျ။ ကွျောငွာအစပိုငျး၌ ဖုနျးကို သဘာဝအတိုငျးမွငျရသညျ့မွငျကှငျးရဲ့ အဓိကနရော၌တှနျ့သှားမညျကို မွငျကောငျးမွငျရနိုငျကွောငျး ရေးသားထားသညျကိုလညျး ပရိသတျမြား မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။
လကျရှိထှကျပျေါနသေောသတငျးမြားအရ Galaxy Z Flip ဖုနျးရဲ့မကျြနှာပွငျသညျ (၆.၇) လကျမရှိနိုငျသလို အနောကျဘကျရှိကငျမရာနှဈလုံးသညျလညျး (12) Megapixel ရှိနိုငျပွီး ဘကျထရီနှဈလုံးနဲ့ Processor မှာမူ Qualcomm Snapdragon 855 Plus အထိ ရှိနိုငျကွောငျးလညျး သတငျးမြားထှကျပျေါနပေါတယျ။ Samsung သညျ Galaxy Z Flip ဖုနျးတဈမြိုးတညျးကိုသာ မိတျဆကျပွသသှားမညျမဟုတျဘဲ Galaxy S20 ဖုနျးမြိုးဆကျမြားနဲ့ပတျသကျသညျ့ အကွောငျးအရာမြားကိုပါ မိတျဆကျသှားရနျ ပွငျဆငျထားပါတယျ။
အသဈထှကျရှိလာမညျ့ Samsung ဖုနျးမြား၌ 5G အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈပွီး 120Hz ရှိသညျ့ Refresh Rate OLED မကျြနှာပွငျနဲ့ (108) Megapixel ရှိသညျ့ ကငျမရာမြားပါဝငျလာဖှယျရှိပါတယျ။ ယခုထှကျပျေါနသေော သတငျးမြားအရ အသဈထှကျရှိလာမညျ့ Galaxy Z Flip ဖုနျးသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့သညျ့ ဒျေါလာ (၁,၉၈၀) တနျ Galaxy Fold ထကျ ပိုမိုစြေးသကျသာဖှယျရှိကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
အော်စကာဆုပေးပွဲ၌ Galaxy Z Flip ဖုန်းအသစ်ကို အမြည်းကျွေးသွားသည့် Samsung
Samsung ကုမ္ပဏီသည် အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် Galaxy Z Flip ဖုန်းအသစ်ကြော်ငြာကို ယနေ့မနက်ခင်းအစောပိုင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အော်စကာဆုပေးပွဲ၌ ထည့်သွင်းကြေညာသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါကြော်ငြာသည် Samsung ချစ်သူများအတွက် အမြည်းသာရှိသေးပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာမှသာ နယူးယော့ခ်မြို့၌ Samsung က တရားဝင်အတည်ပြု ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) စက္ကန့်သာကြာမြင့်သည့် အဆိုပါကြော်ငြာဗီဒီယို၌ Samsung ရဲ့ Galaxy Z Flip ဖုန်းကို အသွင်သစ်၊ အမြင်သစ်ဖြင့် တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ဖုန်းကိုခေါက်လျက်သားအနေအထားရဲ့ အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်၌ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် မျက်နှာပြင်ပါဝင်သလို အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်၌ အသေအချာဓာတ်ပုံရိုက်ယူမည့် ပုံရိပ်ကိုပြသထားပါတယ်။ ကြော်ငြာအစပိုင်း၌ ဖုန်းကို သဘာဝအတိုင်းမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းရဲ့ အဓိကနေရာ၌တွန့်သွားမည်ကို မြင်ကောင်းမြင်ရနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသည်ကိုလည်း ပရိသတ်များ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိထွက်ပေါ်နေသောသတင်းများအရ Galaxy Z Flip ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်သည် (၆.၇) လက်မရှိနိုင်သလို အနောက်ဘက်ရှိကင်မရာနှစ်လုံးသည်လည်း (12) Megapixel ရှိနိုင်ပြီး ဘက်ထရီနှစ်လုံးနဲ့ Processor မှာမူ Qualcomm Snapdragon 855 Plus အထိ ရှိနိုင်ကြောင်းလည်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Samsung သည် Galaxy Z Flip ဖုန်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာ မိတ်ဆက်ပြသသွားမည်မဟုတ်ဘဲ Galaxy S20 ဖုန်းမျိုးဆက်များနဲ့ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကိုပါ မိတ်ဆက်သွားရန် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် Samsung ဖုန်းများ၌ 5G အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 120Hz ရှိသည့် Refresh Rate OLED မျက်နှာပြင်နဲ့ (108) Megapixel ရှိသည့် ကင်မရာများပါဝင်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ ယခုထွက်ပေါ်နေသော သတင်းများအရ အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် Galaxy Z Flip ဖုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၉) ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့သည့် ဒေါ်လာ (၁,၉၈၀) တန် Galaxy Fold ထက် ပိုမိုဈေးသက်သာဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous Justin Bieber ??? ??????????????????????
Next နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာပွဈမှုတဈခုကွောငျ့ ယူရို (၂၅) သနျး ဒဏျရိုကျခံခဲ့သညျ့ အမရေိကနျ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။